QM oo sheegtay inay Sanadkan oo keliya Afghanistaan ku dhinteen 350 Carruur ah – Radio Muqdisho
Hay’adda badbaadada dhallaanka ee Save the Children ayaa Isniintii Shalay ahayd sheegtay in ugu yaraan 363 Carruur ah ay ku dhinteen, 992 kalena ay ku dhaawacmeen horraantii Sanadkan 2018-ka dagaallada ka socda Dalka Afghanistaan.
Hay’adda aan Dowliga ahayn ee Save the Childaren ayaa sidoo kale walaac ka muujisay weerarrada lala bartilmaameedsanayo goobaha waxbarashada, gaar ahaan 12 weerar oo Bishii aynu kasoo gudubnay ka dhacay Gobolka Nangarhar, sida lagu xusay warbixintii ugu dambeysay ee ay Qaramada midoobay kaga hadlaysay xaaladda Afghanistaan.
Howlgalka gargaarka QM ee Dalka Afghanistaan (UNAMA) ayaa Axaddii Todobaadkan xaqiijiyay in Rayidka ku waxyeelloobay dagaalladu ay gaarayaan 5,122, waxaana dhimashada lagu qiimeeyay 1,692 Qof, halka dhaawacana lagu tilmaamay 3,430 Qof.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale warbixinteeda ku sheegtay in kala bar Carruurtani ay waxyeello kasoo gaadhay walxaha qarxa.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in falalka lagu waxyeelleyay Carruutan ay 52% sheegatay Daacish, halka 40% ay masuuliyaddiisu sheegtay UrurkaTalibaan ee ka dagaallama Afghanistaan iyo Pakistaan.
Maamulka Gobalka Banaadir oo Hooyo Caasho Muuse ku wareejiyay Gurigeeda oo mudo badan lagu haystay